HETSIKA FARANY HERINANDRO : Maro ireo hetsika entina miala voly ka anjaranao no misafidy
Ambiansy mafana miaraka amin’i Din Rotsaka
Mafotaka indray ny etsy amin’ny Jao’s Pub Ambohipo anio hariva. Hiverina hiaka-tsehatra i Din Rotsaka raha fa elaela no tsy heno. « Cabaret » goavana, hitondra ireo hira efa nankafizana azy hatramin’izay i Din Rotsaka sy ny ekipany. Mampanantena ambiansy mafana be miaraka amin’ny salegy sy malesa ity mpanakanto ity. Anio manomboka amin’ny 9 ora alina ny fotoana ary tsy voafetra fa miankina amin’ny ambiansy ny fiafaran’ny lanonana.
Vaiavy Rivera « en live » etsy amin’ny Le Glacier
Ela niandrasana. Tonga hanome ambiansy miavaka ho an’ny mpankafy azy etsy amin’ny Le Glacier i Rivera, raha efa elaela tsy nahitana azy. Hihaona voalohany amin’ireo mpankafy azy eto an-drenivohitra izy, amin’ity taona ity. Hitondra ireo hira tena nahafantarana azy, toy ny « Fitiavana tsy nambolegny » miampy ireo vazo izay fampiaram-peon’izy sy Boushirany, ary ny vazo vaovao taona 2017, « Rivera talagnolo ». Anio manomboka amin’ny 8 ora alina ny fotoana, hisy ihany koa ny fahatongavan’ny mpanakanto tsy ampoizina hanampy azy amin’io alina io. Ambiansy tropikaly tanteraka no hanjaka amin’io.
Kawitry mafana hiarahana amin’i Viavy Chila
Vao sambany hanafana ao amin’ny toeram-pilanonana Bonara-Be chez Sa-yah, i Vaiavy Chila sy ny mpandihiny amin’ity taona ity. Sady sambany sehatra voalohany hataony eto andrenivohitra ihany koa. Anio alina, hanomboka amin’ny 9 ora, no hitondrany ny kawitry salegy izay efa nankafizany mpankafy azy hatramin’izay. Hafana tanteraka ny ambiansy amin’io fotoana io, ary tsy hifarana raha tsy maraina andro.